काम नगर्ने, कर मात्र उठाउने- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
गणतन्त्र भनेको नेताहरूलाई कमाइ खाने भाँडोमात्र भयो  । विकास हुन सकेन  ।
जसरी भए पनि जति खर्च गरेर भए पनि चुनाव जित्नैपर्ने र त्यसका लागि व्यापारीहरूसँग सम्झौता गर्न नेतृत्व लिन चाहनेहरू लालायित बने । निर्वाचन जितेपछि जनसेवा होइन, भ्रष्ट व्यापारीको काम गर्दैमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई फुर्सद छैन । वर्षौंदेखि भत्किएका सडक बन्नसकेका छैनन् । वर्षा लाग्यो, हिलोले हिँड्न सकिँदैन । हिउँद लाग्यो, धुलो उडेर बसिसाध्य हुँदैन । राजधानीको अवस्था त कहालीलाग्दो छ भने गाउँघरतिरको अवस्था कस्तो होला ? नगरपालिका करमाथि कर थोपर्छ, काम भने सिन्को भाँच्दैन । सर्वसाधारणसित करमात्र ठटाउने नगरपालिका के काम ? काम नगर्ने कर उठाउने कार्यालय आम नागरिकका बोझ हुन् ।
प्रकाशित : असार २७, २०७६ ११:४७
भारतीय राजदूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तरकारी तथा फलफूलको विषादी चेकजाँज नगर्नु भनी आएको पत्रबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले संशय पैदा गराएको छ  । यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्लान् ? प्रधानमन्त्रीलाई उनको सचिवालय, सल्लाहकारहरूका साथै मन्त्रालयका सचिवहरूले असहयोग गरिरहेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ  ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उपहास गरेको र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजेको यसले देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको कुरा त्यति धेरै सत्य हुँदैन । उनले अरूलाई उल्लु बनाएर आफू चोखिने बाटो खोजेका पनि हुन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइ सुन्दा लाग्छ, देश माफियाले चलाइरहेका छन् । उनलाई चलाउने बलियो समूह छ । त्यही घेराभित्र उनी छन् । व्यक्तिगत स्वार्थले नै मानिस स्वार्थ समूहको घेरा बाहिर निस्कन सक्दैन । जहाँ गयो, ढाँट्न सिपालु ओलीको क्याबिनेटमा प्रायः उनीजस्तै ढँटुवा प्रवृत्तिका छन् । यस्तो कार्यशैलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफलतातर्फ धकेलिरहेको छ । काम नगर्ने, ढाँट कुरामात्र बढी गर्ने बानीले हानि बाहेक केही गर्दैन । आफ्नो चाकडी गर्ने बाहेक अरूलाई शत्रुझैं व्यवहार गर्ने, विपक्षीको कुरा नसुन्ने, तल्लो स्तरका गालीका कारण ओली अलोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन् ।
– निश्चल नेपाल, मण्डन देउपुर–१०, काभ्रेपलाञ्चोक
प्रकाशित : असार २७, २०७६ ११:४६
सनकमा चलेको वायुसेवा
देउवा र पौडेललाई खुलापत्र
सडक प्रयोगमा सावधानी
निगमलाई २० अर्ब किन ?
ग्रहणको समय फरक–फरक